Helitaanka kabidda sigaarka ayaa caawineysa | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Goynta Porn Caawimaad muusikada qaawan ee internetka
Wadada dib u soo kabashada
Soo-noqnoqoshada joogtada ah ee lebbiska internetka ayaa yareyn kara arrinta cawlan ee qaybaha muhiimka ah ee maskaxda. Tani waxay dhaawacdaa qaab-dhismeedkeeda iyo shaqadeeda. Isbedelada siyaabo badan ayey u muuqan karaan:
sida kabuubyo shucuur ah
Naqshadaynta dhadhanka jinsiga
la'aanta danta lamaanayaasha dhabta ah
Qanacsanaan la'aan galmo
go'doon uu bulshada
Dhaqdhaqaaqyo jinsi aan habooneyn
rabitaan ah in uu ka shaqeeyo qoraallada porno
erectile xummad iyo xaaladaha qaarkood
kor u qaadida walxo sharci darro ah.
Dadka intiisa badani way isku raacsan yihiin in kuwani ay yihiin kuwo aan fiicnayn, aan loo baahnayn iyo xitaa waxyeelo khatar ah. Si kastaba ha noqotee, ma jabtid, waxaa jira waddo dib ugu soo kabashada.
Waa kuwan qaar ka mid ah boggaga internetka ee dib u soo kabashada iyo taageerada ee khaaska ah ee qarsoodiga internetka. Dhammaantood waxay ku saleysan yihiin Maraykanka ama Australia. Saddexda hore waxay leeyihiin bulshooyinka internetka. Kuwani waxay caawimaad ka helayaan xubnaha kale ee bulshada 24-saacad maalintiiba. Waxay leeyihiin xubno badan oo ka socda Boqortooyada Midowday.
Dib u soo noqoshada Nation
Dib u soo noqoshada Nation waxay ka caawisaa dadka 'reboot' maskaxdooda ku dhiirigelinta iyo waxbarashada. Dib u soo kabashada waa nasasho buuxda oo ka yimaada kicinta galmada ee dabiiciga ah (ie pornography). Dib u bilaabidda Nation waxaa aasaasay by dhaqdhaqaaqa Mareykanka ah ee Gabe Deem (Twitter @GabeDeem). Waxay yihiin bulsho dad ah oo soo ogaaday saameynta xun ee fara-xumeynta. Haddii adiga ama dadka aad jeceshahay ay kufilan yihiin maandooriye iyo / ama jilicsanaanta jinsiga ku salaysan, meeshan waa adiga. On this site waxaad ka heli doontaa kheyraad iyo macluumaad badan oo lagu qalabeeyo qalab lagama maarmaanka u ah in ay bilaabaan dib u soo kabashada maanta. Waxaad sidoo kale sii ogaan doontaa dhibaatada iman karta ee ay keento porn-ka internetka. Reboot Nation ayaa sidoo kale maamula YouTube Channel TV.
NoFap waa luuqada Ingiriisiga ugu weyn ee is-caawinta bulshada. Waxaa caqabad ku haya caqabadaha ay ka qaybgalayaashu diidaan ladagaalanka iyo xajinta si ay uga soo kabtaan xatooyo sigaar ah iyo dabeecad galmo qasab ah. Maalmaha 90 waa heerka caadiga ah. NoFap waxay taageertaa dhammaan dhibbaneyaasha qaylo-dhaanta. Haddii aad leedahay ladnaanta ladnaanta laftigaaga ama aad u baahan tahay taageero kaliya oo ah lammaane, waalid, ama aad jeceshahay mid ka mid ah qof la halgamaya filimada, NoFap
bulshada ayaa halkan ku jooga si ay kuu taageerto.
Reddit NoFap waa nooc kale oo NoFap ah oo ku saabsan reddit / r / forum.
Khayraadka kale ee internetka
Maskaxdaada on Porn waa kaydka ugu weyn ee aduunka ee macluumaadka sayniska ee ku saabsan qaadashada filimada internetka.
Laba sadaqo oo caawimaad u leh dadka ka imanaya iimaan ama asal badan oo ka mid ah muxaafidka La dagaallanka daroogada cusub ee Maraykanka iyo Xasilloonaanta dib loo soo celiyo Australia.
Sidoo kale, boggan Australia U gudbi weynaanta wuxuu leeyahay macluumaad wanaagsan iyo fiidiyowyo.
Tallaabada 12 ee ku salaysan bulshada iyo soo kabashada SMART
Galmada Sumaysan (SAA) waxay siisaa kooxaha taageerada asxaabta dadka qaba qabatinka galmada iyadoo la raacayo mabaadi'da 12-tallaabada ah. Shirarku waa bilaash waxaana lagu qabtaa dhamaan daafaha Boqortooyada Midowday (UK).
Galmada iyo Jacaylka Addicts qarsoodi (SLAA) waxay bixisaa kooxo taageero kooxo ah oo loogu talagalay dadka jinsiga ah iyo / ama jacaylka jacaylka ka dib mabaadii'da 12. Kulamadu waa bilaash oo waxaa lagu qabtaa gudaha UK.
COSA waa barnaamij xoojinta 12 ee ragga iyo haweenka noloshooda ay saameeyeen dabeecadaha galmada ee qasabka ah. Kulamadu waa bilaash oo waxaa lagu qabtaa gudaha UK.
Dib u soo kabashada SMART - Tababbarka Is-maamulka iyo Soo-kabashada. Adeegyada khadka tooska ah ee UK SMART Recovery waxaa ka mid ah barxad isku xirka bulshada, goob tababar iyo nidaam lagu sheekeysto.
CEOP waa Taleefanka Carruurta iyo Amarka Ilaalinta Internetka. Booliiska oo idil, waa goobta UK oo dhan. CEOP waxay bixisaa taageero marka wax dhacaan internetka oo kaa dhigey inaad dareento walwal ama ammaan.
The Jooji Hada! sadaqo qayb ka ah Lucy Faithfull Foundation, labadaba hay'adaha samafalka ee kahortaga cunugga, waxay caawimaad siiyaan ragga (dumarka sidoo kale) kuwa isticmaalaya waxyaabaha xadgudubka caruurta ah ama leh dareen jinsiyeed oo ku wajahan carruurta (hoos eeg).
NSPCC waxay shaqaysaa Xannaanada carruurta taas oo ah adeeg lagu caawinayo dhallinyarada leh noocyada kala duwan ee arrimaha. Waxay leedahay ilo wanaagsan oo ku saabsan waxqabadka galmada ee internetka iyo filimada.
Mashruuca runta ah ee qaawan wuxuu ku salaysan yahay Manchester wuxuuna bixiyaa caawimaad xagga aragtida Masiixiga ah.
Software * si loo xakameeyo gelitaanka filimmada
Shaandheeyaashu waxay gacan ka geysan karaan maaraynta isticmaalka filimada, laakiin marwalba waa laga tallaabsan karaa. Waxaan u aragnaa inay yihiin gargaar waxtar leh, laakiin qof balwad leh oo doonaya inuu adeegsado ayaa heli doona waddo ku hareeraysan. Badanaa tani waxay ku lug leedahay adeegsiga qof kale taleefankiisa ama kiniinkiisa.
Indhaha Indhaha waxay bixisaa xisaabteynta internetka iyo shaandhaynta, waxay diirada saareysaa dadka isticmaala filimada
Bark waxay u oggolaadaan waalidiinta in ay kormeeraan isticmaalka warbaahinta bulshada
Norton Premiere-ka Qoyska
Caqabada Macluumaadka iyo Ilaaliyaha Qoyska ee Integro
Qoyska aaminka ah ee McAffee
* Kuwani waa qaar ka mid ah fursadaha badan ee software ee la heli karo. Ku qorista halkan ma aha mid ka soo horjeeda Hay'adda Reward Foundation. Waqti u qaado si aad u baartid santuuqyada iyo barnaamijyada kormeerka ay sax yihiin baahidaada.
Buugaagta lagugula taliyay
Maskaxdaada on Porn: Farshaxanka Internetka iyo Sii-saarka Soogalootiga by Gary Wilson, Daabacaadda Dawlada Dhexe. Waxaa laga heli karaa daabacaan, buug cajalad ah iyo buug e-buug ah oo ku saabsan caynka(Nooca maqalka ah ayaa diyaar ah free haddii aad iska qorto Audible muddo bil ah tijaabada bilaashka ah.)
Qaadashada: Lagu mamnuucay Porno Internet by Noah B. E, Church. Waxaa laga heli karaa bilaash ahaan PDF haddii aad saxiixdo halkan. Kaniisada Noah waxay wax ka qortay khibrad, isagoo ahaa qaawan internetka qaawan naftiisa.
The Trap Trap: Hagaha Muhiimka ah ee Dhibaatooyinka Dhibaatada ee ay keento Saqarsho by Wendy Maltz iyo Larry Maltz.
Cudurka Galmada: Aragtida Wadaagga by Paula Hall, oo ah hoggaamiye sare ee UK.
Dhakhaatiirta: Ragga ku jira bogagga bogsashada ayaa sheegay in dhakhaatiirtu aysan inta badan ka warqabin saameynta isticmaalka qaawan. Natiijo ahaan waxay u qoraan Viagra ama wixii la mid ah si loola tacaalo arrimaha kacsiga. Viagra waxay ka shaqeysaa 'suunka hoostiisa' si ay uga caawiso socodka dhiiga guska. Dhibaatadu waxay tahay cillad la'aanta erectile-ka ee jilicsan waa arrin ku saabsan calaamadaha neerfaha ee saboolka ah ee u dhexeeya maskaxda iyo xubnaha taranka. Natiijo ahaan Viagra iyo kaniiniyada la midka ah badanaa ma shaqeeyaan ama joojiyaan shaqada si dhakhso leh ayagoo uga taga ragga xitaa walaac badan. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida ED u dhacdo, arag tan bandhig. Waa kan fiidiyow 11 daqiiqo ah wareysi lala yeelanayo aqoon yahanka cilmiga kaadi mareenka.
Haddii aad tahay xirfadle daryeel caafimaad oo jeclaan lahaa tababarka CPD ee arimahan, fiiri khariidadeena weydaarsi. Waxay ku qoreen Kolejka Boqortooyada ee Dhakhaatiirta Guud.
Scotland, waqtiyada xawilaadaha ee GP-yada xarumaha caafimaadka galmada waxay ku dhowyihiin bilaha 9-12. Xarumaha caafimaadka galmada waxay badanaa u gudbiyaan kiisaska looga shakisan yahay ee ficil-celinta (pornography) ee loo adeegsado daaweeye ku takhasusay xirfad gaar ah. Haddii aadan awoodin in aad iska joojisid porn iyada oo adeega internetka bilaash ah, waxaa jira fursado kale. Waxaa laga yaabaa inaad leedahay arrimaha hoose ama aad u baahan tahay taageero markaad ka joojineyso a daaweeye jinsi u tababaran. Daaweeye jinsi fiican waa in uu fahmo xanuunka foosha ku xiran iyo takoorka galmada. La xiriir mid ka mid ah ururada Dalladaha ee UK:
Xiriirada Scotland (lammaanaha keliya).
Ururka Ingiriiska ee latalinta & cilminafsiga.
La-talinta & Cilmi-nafsiga ee Iskotland.
Kulliyadda Xirfadaha Galmada iyo Xiriirka.
Ururka Daaweynta Ku-Meel-Gaarka iyo La-qabsashada.
Qabatinka suuxdintu wuu sii kici karaa. Haddii lagugu soo oogay dembi galmo waxaad u baahan tahay caawimaad xirfad leh. Isla markiiba caawimaad ka raadi daaweeye jimicsi tababaran. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa garyaqaan wanaagsan.
Haddii aad ku sugantahay Scotland, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto adeegga bilaashka ah Jooji Hada!. Jooji Hadda waa hay'ad samafal ah ilaalinta carruurta. Waxay aaminsan yihiin in furaha kahortaga xadgudubka galmada uu yahay wacyigalinta waalidiinta iyo xubnaha bulshada. Waa qayb ka mid ah Lucy Faithfull Foundation oo ka shaqeeya UK.
Jooji Hada hadda waxay u shaqeysaa dhisida kalsoonida dadweynaha ee aqoonsiga iyo ka jawaabidda dareenka ku saabsan xadgudubka galmada iyo dhiig-miirashada carruurta. Waxay sidoo kale bixiyaan adeegyo taageero dadka shakhsiyaadka leh fikradaha galmada. Tan waxaa ka mid ah kuwa laga yaabo inay halis ugu jiraan xadgudub galmo. Jooji Hada waxa kale oo ay caawisaa kuwa lagu soo oogay dembi galmo oo la xidhiidha haysashada sawir-xumada carruurta ama kuwa la midka ah. Tan waxaa ka mid ah dadka lagu baadho dembiyada internetka. Waxay sidoo kale taageeraan asxaabta iyo xubnaha qoyska ee shakhsiyaadka khatarta ku jira galmada ama ku xadgudbay.
<< Aqoonsiga Dhibaatada Porn Tagista Bilaash Bilaash ah >>